Barcelona oo qorsheneysa in dabaal dag hoose sameyso hadii ay hanato La Liga…Ogow sababta? – Gool FM
Barcelona oo qorsheneysa in dabaal dag hoose sameyso hadii ay hanato La Liga…Ogow sababta?
Kaafi May 10, 2016
(Catalonia) 10 Maajo 2016. Barcelona waxa ay haysataa fursad ay ku difaacan karto La Liga toddobaadka soo socda, balse hadii ay dhacdo Luis Enrique ma rabo in uu dabaal deg waali ah arintaas laga sameeyo.
Saddex dhibcood oo ay ka helaan Granada ayaa ka xiga, hase yeshee, qorshana ma aha in koobka ay ku qaadaan Los Carmenes, waxa ay ka door bidayaan bas furan oo ciyaaryahaanda laga salaamo marka ay soo caga dhigtaan madaarka diyaaradaha Barcelona.
Wixii intaa ka dambeeya, safka Barcelona waxa ay mari doonaan wadooyinka bartamaha Barcelona, laakiin wali lama iclaamin dhabahaas tuu noqon doono maadaama Camp Nou oo taageereyaal la ciir ciiri doono.
Sababta ugu weyn ee hoos loogu dhigay dabaal daga ayaa ah in Enrique oo doonayo in bishan uu koob kale qaado marka ay fiinaalaha Copa del Rey isku arkaaan Seviile.
Jose Mourinho oo looga gacan haatinayo xulka qaranka Indonesia
10-ka ciyaaryahan ee ugu wanaagsan kuwa seegaya Euro 2016+SAWIRO